ဝတ်လစ်စလစ် ကိုယ်ဟန်ပြမယ်လေး ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခံရခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ၀တ်လစ်စလစ် ကိုယ်ဟန်ပြမယ်လေး ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခံရခြင်း
၀တ်လစ်စလစ် ကိုယ်ဟန်ပြမယ်လေး ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခံရခြင်း
Posted by ムラカミ on Jun 7, 2012 in Arts & Humanities, Creative Writing, My Dear Diary, Photography | 55 comments
ခုတလော သတ်သည့် ဖြတ်သည့် သတင်းတွေ ခေတ်စား၏။
ကျနော်လည်း ခါတော်မီ အသတ်အဖြတ်များ တင်ခြင်း ဟု မသတ်မှတ်စေလိုပါ။
ကျနော် ပြောပြချင်သည်မှာ တကယ့် အဖြစ်အပျက် ဖြစ်၏။
ဟုတ်ပါသည်။ အတိအကျ ဆိုသော် မနေ့ ညက ပင်ဖြစ်သည်။
ထိုသတင်းကြားကြားချင်း ကျနော် အလွန် တုန်လှုပ်ခြောက်ခြား သွား၏။
သို့သော် သတင်းကား သတင်းမှန်တည်း …။ ဘယ့်နှယ့် …
စိတ္တဇ ဓါတ်ပုံဆြာ တယောက် ၀တ်လစ်စလစ် ကိုယ်ဟန်ပြမယ်လေးအား …
ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်သည့် သတင်း…။
ဒီသတင်းကို လိုက်မည် …။ လုံးဝ လက်လွတ် မခံသင့်သောသတင်း …။
ဟုတ်သည်…။ စီဂျေတစ်ဦး အနေဖြင့် စီဂျေတာဝန်ကျေရမည်။
ထို ဖြစ်ရပ်မှာ ကျနော် နေထိုင်သော မြို့ ကလေးတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သောကြောင့်
ထိုမြို့တွင်နေထိုင်သော ကျနော့်တွင် တာဝန်ရှိသည်။ (မည်သူ တာဝန်ပေးပေး
မပေးပေး စီဂျေဟု ခံယူချက် ပြင်းပြစွာ စွဲကိုင်၍ ထိုသတင်းကို အိပ်ရေးပျက်ခံ
သတင်းအစုံအလင်မှာ ဤသို့ဖြစ်သည်။ (နာမည် နေရပ်လိပ်စာ စသည်တို့မှာ
တစုံတဦး ကို မလိုလားအပ်ဘဲ မထိခိုက်စေလိုသဖြင့် အတိအကျ ဖော်ပြခြင်း
တောမြို့ ကလေး တစ်မြို့ တွင်ဖြစ်သည်။ စိတ်ရောဂါ အခံရှိသူ ဓါတ်ပုံဆြာ
တစ်ယောက်သည် ၀တ်လစ်စလစ် ကိုယ်ဟန်ပြမယ်လေးအား ကိုယ်ဟန်ပြသမှု
အပြီးတွင် ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ပစ်လိုက်ပြီး အလောင်းကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်လိုက်မှု
ပင်ဖြစ်တော့သည်။ နောက်ဆက်တွဲ သတင်းများအရ ကိုယ်ဟန်ပြခ ငွေကြေး (၀ါ)
ခံစားမှု တစုံတရာ မပေးချေလိုသောကြောင့် သတ်ဖြတ်ခြင်း လည်း မဟုတ် ဟု
သိရလေသည်။ အထီးအမ သဘာဝ လိင်ကိစ္စ နှင့်လည်း လားလားမှ မပတ်သတ်
ဟု လည်း သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြန်သည်။
အဘယ်ကြောင့်များ အရွယ်ကောင်း ကိုယ်ဟန်ပြမယ်လေး အပေါ် ရက်စက်စွာ
အကြောင်းမဲ့ သတ်ဖြတ် ခဲ့ပါသနည်း။ ပဟေဌိ တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
ထို ဓါတ်ပုံဆြာ အား ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန် မှာ ကျနော့် အနေဖြင့် မစွမ်းသာ
သောကြောင့် လက်တလော ထိုမျှသာ ပြောပြပေးနိုင်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ
အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ လှုပ်ရှား အရေးယူ ဆောင်ရွက်မည် ကိုလည်း
သိချင်စမ်းပါဘိ ။ ဖြောက်ဖျက်ခံ ကိုယ်ဟန်ပြမယ်လေး၏
ရုပ်အလောင်းကား ယခုတိုင်အောင် ရှာဖွေ မတွေ့ရှိသေးဟုတော့ သိရပါသည်။
ကျနော်လည်း သတင်း အစအနများ ရတန်သင့်သလောက် ရရှိပြီးသောအခါ
သတင်းဓါတ်ပုံများ လိုက်လံရှာဖွေကြည့်မိပါသည်။ ဟုတ်ကဲ့..သတင်းဓါတ်ပုံများလည်း
ရသင့်သလောက် ရရှိခဲ့ပါသည်။၀တ်လစ်စလစ် ကိုယ်ဟန်ပြမယ်လေး မသေဆုံးမီ
မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ရိုက်ယူခဲ့သော ပုံများ ဟု သိရပါသည်။ (ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်သော
ပုံများကတော့ မှတ်တမ်းပင် မရှိသလား ..ကျနော်ပဲ မရရှိခဲ့ခြင်းလား မပြောတတ်ပေ)
ထို့ကြောင့် ၀တ်လစ်စလစ် ကိုယ်ဟန်ပြမယ်လေး ကိုယ်ဟန်ပြနေပုံ အချို့ကိုသာ
ထုတ်နှုတ် တင်ဆက်လိုက်ရပါသည်။ မကြည့်ဝံ့သူများ ဆက်၍ မဖတ် မကြည့် ရန်နှင့်
ယခုပိုစ့်ကို ပိတ်ပစ်ရန် တင်ကြို ပြောဆိုခွင့်ပြုပါ။
ဘယ်ခြင်က အင်္ကျီဝတ်တယ် ကြားဖူးလို့တုန်း နော့်….
ခြင် အမ ကပဲ ကိုက်တာခည … ခြင်ဟာ အစားအစာ လို့ငှာ
ကိုက်တာမဟုတ်ဘဲ ..ဥတွေ မျိုးအောင်ဖို့ သွေးနွေးသတ္တ၀ါရဲ့
သွေးလိုလို့ (အပူချိန်အတွက်) ကိုက်တာဖြစ်လို့ …ခြင်အထီး ဟူသည်
မကိုက်… အစားအစာ အလို့ငှာ ၀တ်ရည် အပင် အရွက်မှ အရည်
စုတ်ပီး အသက်ရှင်၏ ဟူသတတ်….။
သည်လို သည်လိုတွေ ကိုယ်ဟန်ပြခိုင်းပြီးကာမှ …
လူမဆန်စွာ ရက်ရက်စက်စက် လုပ်ရက်လေခြင်း …
ယခုကဲ့သို့ ..ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ရန် အားထုတ်ခဲ့သော်လည်း
အသက်ဘေး ပေကိုးဗျာ …
သူလည်း သူစွမ်းသလောက်တော့ ကြိုးစားခဲ့ရှာပါသေးတယ်..
တွေ့လား ..သွေးတွေ ၀ နေတာ …
ကိုယ်ဟန်ပြဖိုး အကျအန ယူပီးသားပါဆို…
အလန့်ထညက် လုပ်တာ ဆောဒီးပါ ရွာသူားတို့ …
တရေးနိုးလို့ စီးကရက် ထသောက်တာ ..
၀ရန်တာ တံခါးဖွင့်တုန်း ဒင်းက ၀င်လာတော့ …
ကံဆိုးဖို့ ဖြစ်သွားရှာတယ်ဗျာ …
ကိုယ့် အိမ်ကို မဖိတ်ဘဲလည်း လာသေး ..
သွေးလည်း စုပ်သေး …
သည်အတိုင်း ပေးသေလိုက်ဖို့ မတန်. .နည်းနည်းမှ မတန်…
ဒါ့ကြောင့် ဒင်းကို မသေခင်ကလေး အသုံးချလိုက်တာ …
ကျွတ်…ကျွတ်….တော်တော်ရက်စက်တဲ့ ဂီ ပဲ
မသေခင် မထနိုင် မပျံနိုင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ထားပါလိမ့်…
အေး…ပေါက်တတ်ကရ များများပြော.. နောက်တခါဆို နင့်လဗျွတ်ကို ကာယဗလမောင် ခြင်ထီးကြီး ကိုက်လိမ့်မယ်။
အတော်နောက်တဲ့ ကိုဂီပဲ … စိတ်ဝင်တစား ဖတ်လာတာ နောက်ဆုံးကျမှ … ဟတ်ကော့ကြီး ဖြစ်သွားတော့တယ် …. သူ့ကိုယ်ဟန်ပြမယ်က .. အရင်ကတည်းက အ၀တ်မ၀တ်တာ … ဟိဟိ ..
ဒါနဲ့ … အထီးနဲ့ အစ်မ ဘယ်လိုခွဲလိုက်ပါလိမ့်နော် ……… လာကိုက်တဲ့ခြင်မို့ …. အမလို့ သတ်မှတ်လိုက်တာလား …. ခွိခွိ
အော်ငါ့နှယ့်နော်။ အခုတလောရင်တုန်ပန်းတုန်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုမှပဲ။ တူကလဲ လူဇိုး။ ကြံကြံဖန်ဖန် ဟယ်။ ခြင်တောင် အလွတ်မပေးဘူး။ ဓါတ်ပုံရိုက်တာပြောပါတယ်။ အဲလိုအမှု့မျိုးကပုဒ်မ ဘယ်လောက်ပါ လိမ့်။ တော်တော်ဆိုးမယ်ထင်တယ်နော်။ ဒါထက်စကားမစပ် ဂျာပွန်မှာ ခြင်ရှိလို့လား။ ခြောက်မျက်နှာ ကပြော တယ်။ တကြောင်းထဲမမန့်ရဘူးတဲ့။ အဲဒါနဲ့အကြောင်းတွေများအောင်မန့်ကြည့်တာ။ ဟီဟိ
ကဲ .. ကဲ တိုင်ပေးမယ်လိုက်ဆို ..
“ပါဏာတိပါတာ (insect မပါ) ………..”
“ပါဏာတိပါတာ (ဂျစ်ပစီ ဒေါ့ဂ် မပါ) ………..”
ဒီတစ်ခါနဲ့ဆို သူလုပ်တာ ၂ခါရှိပြီ ပါကင်ဖေါက်တုံးက ၁ခါ အခု ၁ခါ..
အပေါ်ရောက်ပြီးမှ ကန်ချခံရတယ် …ခံစားရတယ်..အားဟားဟားးး
ဒါနဲ့ စိတ္တဇ ဓါတ်ပုံဆြာ တယောက် ဆိုတော့ ဓါတ်ပုံဆြာက ရူးနေတာလားဟင်င်င်
” ခြင်အထီး ဟူသည် မကိုက်…
အစားအစာ အလို့ငှာ ၀တ်ရည် အပင် အရွက်မှ
အရည် စုတ်ပီး အသက်ရှင်၏ ဟူသတတ် ”
ဒါဆို အထီးတွေက သက်သတ်လွတ် သမား သူတော်ကောင်းကြီးပေါ့ ။
အနက်ပွား ထွက်မယ့်မေးခွန်းတွေ မဖြေရ၀ူးတဲ့ အကျိ ဆူလိမ့်မယ်..
အော်လူဆိုး ခေါင်စဉ်ဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာထိတ် စိတ်မကောင်းစွာ ၀င်ကြည့်လာတာ…. ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း နောက်ဆုံးကျမှ ရေရေလယ်လယ် ခံလိုက်ရမှန်းသိသွားတယ်… မုန်းထာအေ…
တော်တော်လဲ တတ်နိုင်တဲ့သူ ခြင်ကိုတောင် အနီးကပ်ဆွဲပြီး ဓာတ်ပုံနဲတကွ ပို.စ်အဖြစ်တင်နိုင်တယ်…
အင်း သည်ပို့စ် ကတော့ — ရေပန်းစားနေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေအကြားမှာ — ကိုယ်ဟန်ပြမယ်တို့၊
၀စ်လစ်စလစ်တို့နဲ့ ဖမ်းစားပြီး၊ အဲသည်လိုသတင်းနောက်ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်စိတ်ဝင်စားတတ်သူ ကျုပ်အပါအ၀င် ခံရလေ သတည်း၊ ကောင်းလေစွတစ်ကား။
ဒါပေမည့်စိတ်ပညာရှုထောင့်အရ ၊ ရေပန်းစားပြီး ရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့ မကောင်းမှုစီးေ ကြာင်း သတင်းတွေကိုစိတ်ထွက်ပေါက်ပေးစေတယ်၊ တော်ပါပေ့ ဂီ ရယ်။
မကောင်းမှုတွေစဉ်တူဆက်တိုက်ဖြစ်လာစေတဲ့ကိစ္စတွေဟာ၊ တစ်ခါတစ်လေမှာ သတင်းတွေမှတစ်ဆင့်၊
သုံးသပ်ဆင်ခြင်မှု အမျိုးမျိုးအပေါ်၊ အယူအမျိုးမျိုးကွဲပြားစေပြီး၊ဒါကို မသိစိတ်မှ ဟီးရိုးလို့မြင်မိတဲ့အခါ၊ အလားတူ ကျူးလွန်တာတွေဆက်တိုက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဆရာကြီးဦးအောင်သင်းဟောဘူးတယ်—၊
အင်္ဂန်လန်မှာ ချစ်သူစုံတွဲ မြစ်ထဲအတူခုန်ချသတ်သေတာကနေ၊ဆယ်ကျော်သက်တွေအကြားရေပန်း
စားပြီး စုံတွဲပေါင်းများစွါလိုက်ခုန်ချကြတာတွေ၊ နောက်ဆုံး ရဲ မနိုင်တော့ မြို့တော်ဝန်မှ အနှီခုန်ချသေသူ
စုံတွဲများကို မြို့တော်ခန်းမရှေ့ ၀စ်လစ်စလစ် သင်္ဂြီုလ်မယ်အမိန့်ထုတ်တော့မှ ၊အဲဒါဂျီးကို ရှက်စရာကြီး
မြင်ပြီး အဲသည်အဖြစ် ရပ်တန်းကရပ်သွါးပါသတဲ့ဗျား။တော်လိုက်တဲ့မြို့တော်ဝန်ဗျား။တရားဥပဒေ စိုးမိုး
ရေးဆောင်ရွက်သူတွေဟာ ဆိုက်ကို ပညာပါကျွမ်းကျင်ရသကိုး။ ဒါကို မတတ်ပဲဥပဒေစိုးမိုးရေး လုပ်နေ ရင်တော့ —– တွေးသာကြည့်ကြပေရော့ ၊ မကြီးတာကကျယ်လာ၊မကျယ်တာကကြီးလာမှာပဲ။
ခေါင်မိုးနဲ့ ခေါင်းနဲ့ ဆောင့်သံ
ဆက်တိုက်တွေ့နေရတာ ကြာတော့ ဖတ်ရမှာတောင်ကြောက်လာတယ်
စိတ်မကောင်းစရာသတင်းအထင်နဲ့ ကြည့်ပြီး ပြုံးရယ် ရတဲ့အဖြစ်တွေ့ရတော့
ခြင် ရဲ့ ခြေချောင်း တွေ မှာ ရှိ တဲ့ အမွှေးအမျှင် မြင် နိုင် အာင် ရိုက် ထားတာ ဘဲ။
ခြင်ကိုက်တာကိုတောင် မိုးပြိုသလို အလန့်ထညက် ဖြစ်အောင် လုပ်တယ်။
ဦးပါပြောသလိုပဲ ကိုက်နေတဲ့ခြင်ကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဒီလောက် ပုံအများကြီးရအောင် ရိုက်နိုင်ပါသလဲ…
ဆက်ကြည့်ရမလား မကြည့်ရဘူးလားနဲ့ဇဝေဇ၀ါ တောင်ဖြစ်သွားပါတယ်။
အော်တောင်ရီမိတယ် ငါ့နှယ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ ဆိုပြီး။
ဟွန်းးး ခြင်သတ်ကောင် .. ယက်ဆက်ရုတ်မာ လိုက်ဒါဟယ်….
ဒါမျိုးတွေ့ ရတော့ ခြင်ကြီးကရွံစရာကြီး
Senior General MaiSonKha (FFSS=Freedom Force of Shan State)
ခြင် မျက်ခွက်ကလဲ ဘုတွေနဲ့ 
ခင်ဗျားတို့ဂျပန်နိုင်ငံလာရင် ခြင်ဆေးခွေ ၀ယ်နိုင်မှ လာတော့မယ်
လောလောဆယ် ဆူးလေဘုရား သွားဖူးမလို့လမ်းစရိတ် နှစ်ရာလောက် ခဏချီးစမ်းဘာဦး
အမ်…….အကောင်းအောင့်မေ့လို့ စိတ်ဝင်တစားဖတ်လိုက်ရတာ။ တော်တော်နောက်တဲ့ အင်ဇာဂီနော်။
ရဲတိုက်နဲ့မတူပဲနေတော့မယ်…။ သူ့ကိုယ်ဟန်ပြမယ်ရဲ့ အနီးကပ်အလှက ကျက်သီးတောင်ထတယ်။ ခြင်ကိုက်ခံရမှာတောင် ကြောက်လာပြီ။
ဓါတ်ပုံနေရာရောက်တော့ ဖြည်းဖြည်းလေးကလစ်ကလေးကိုဆွဲပြီးကြည့်တာ ရုတ်ပျက်ဆင်းပျက်ပုံဆို အမြန် ပြန် တင်လိုက်မယ်ပေါ့ ခုတော့ ငါ့နှယ် (စာရေးသူက စာဖတ်သူကို ပါအောင်ဆွဲခေါ်နိုင်ပါ့)
ဟယ် ယုတ်မာလိုက်တဲ့ ဒါ့ပုံဆရာ ..ဘယ်လိုများ သတ်လိုက်ပါလိမ့် ..
မကြည့်ဝံ့သူများ ဆက်၍ မဖတ် မကြည့် ရန်နှင့်
ိဆိုတော့ .. အောက်ပိုင်းကြည့်တော့ဘူးနော် .. မီးကြည့်ရဲဘူးချင့် ….
အော် .. သူက ဂျာပွန်မှာဆိုတော့ ခြင်ဆိုတဲ့သတ္တ၀ါကို အထူးအဆန်းလုပ်ပြီး ဒါ့ပုံရိုက်ပြနေတာကိုး …
အိမ်ပါတ်လည်မှာ လယ်ကွင်းနဲ့ ကားခြံတွေပဲ ရှိတယ်..
မြို့မှာနေတုန်းကတော့ ခြင်ဆိုတာ ဘာမှန်းတောင်မသိခဲ့တာ..ဂုဒေါ့ ဂုဒေါ့..
သည်ကခြင်က အတော်ညှက်တာ ကလား ..
ဘိရုမာနဲ့ ယှဉ်ရင် ဒီက ခိုက ဟိုက ကျီးကန်းလောက်ရှိပြီး
ကျီးကန်း က သိမ်းငှက်လောက် ရှိရဲ့ …အဲ..ခြင်ကျမှ ဘာလို့ ညှက်နေသလဲ မဆိုနိုင်…
မဟုတ်တာရေးတော့မယ်ဆိုတာတော့ ရိပ်မိခဲ့ပေမဲ့ ခြင်ဇတ်လမ်း ဖြစ်မယ်လို့တော့မထင်မိခဲ့ဘူး ..
ကျေးကျေးပါ … ပူလောင်မူ့တွေ တဒင်္ဂသက်သာသွားတာ…
နန့်ကြောဆွဲ ဖရဲမ says:
ခေါင်းစီးကြည့်ပြီး လျောက်ဖတ်ကြည့်လိုက်တာ ..
သတ်ခံရတဲ့ ကိုယ်ဟန်ပြမယ်လေးဂ ဟိုဒင်းဟုိုဟာ ဖြစ်နေတာကိုး ..
အတော် နောက်တဲ့လူ …
ချဉ်ပေါင်ရိုးမ ဒုတ်ထိုးမ အမှိုက်ပုံမ စည်ပင်သာယာ ကတော်မ ညည်းနှယ်အေ စိတ်ဝင်တစားခေါင်းစဉ်အောက်မှာ တ၀တပြဲ ကြည့်ပလိုက်မယ်ဆိုပီး ကြည့်လိုက်ခါမှ ဒင်းရဲ့ ကင်မလာကြီးနဲ့ ဒင်းကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတဲ့ ဟာကြီးဖြစ်နေသကိုး…… ကံဆိုးရှာတဲ့ ကိုယ်ဟန်ပြမယ်လေးရယ်…… နောက်ဘ၀ ဂီမနဲ့ထပ်မတွေ့ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော်……..
အော်….စိတ်မကောင်းလိုက်တာနော်…အရင်နေ့က ရွာထဲမှာ စိတ်ဒဇလူသတ်သမားလိုတစ်ယောက်ကို ရိတ်ခနဲတွေ့လိုက်သလိုပဲ.. အဲဒီကတည်းက သူ့မျက်လုံးတွေကမူမမှန်ပါဘူးလို့တွေးနေတာ..အခုတော့ ခြင်မော်ဒယ်လေး အစတေးခံလိုက်ရတာပဲ…
အဲ့ဒါ ကျုပ်ရဲ့ နာမည်ကျော် အယ်လ်ဘမ်…
စတုပစ်ဂီ့ နဲ့ စမတ်ဂီ့ ထဲက စတုပစ်ဂီ့ ပဲ ရှိသေးဒါ..
စမတ်ဂီ့ ကြည့်မား …ပြမယ်….
ခေါင်းက အစိမ်းတွေဆိုးထားတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာကခရမ်းရောင်လိုလို၊ အတောင် က ရောင်ပြန် အတောင်နဲ့ အခုခေတ်ပန့်ခ် ခြင်ပဲ။ အရမ်းခေတ်မှီတဲ့ လှတဲ့ မော်ဒယ်တွေတောင် သူ့လိုမလုပ်နိုင်ဘူး။ အကိုက်ခံလိုက် ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတယ်။ ဟီးဟီး
ဂေါင်းက အစိမ်းက ကွန်ပေါင်း အိုင်း လို့ခေါ်တဲ့
စုပေါင်း မျက်စိဒွေ… ပျားအုံကွက်လိုမျိုး စုထားတာ..
သူက လူဒွေလို မျက်စိ ၂လုံးတည်း မဟုတ်ဘူး…
ယင်ကောင် တို့ ပုဇင်းရင်ကွဲ တို့လည်း တူတူဘဲ..
သည်မျက်စိ မှာ မပေါ်တော့ မမြင်ရတော့ရင် နောက်မျက်စိ မှာ
မြင်ရဒယ် .. ယင်ကောင်ရဲ့ မျက်စိက ၃၆၀ဒီဂရီ အကုန် မြင်နေရသတဲ့…
ညက အကောင်က ပိစိကွေးမို့ ဆိုက်လည်း ချုံ့လိုက်ရလို့
အဲ့လောက်ပဲ ပေါ်တာ ..နောက်မှ ပုဇင်းရင်ကွဲ ကို သေချာရိုက်လာခဲ့မယ်…
အမလေး ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး လန့်သွားတာပဲ၊ ဘယ်သူများလဲလို့ …..
ဟီးဟီး ပြီးမှ ………………..
Azzurri ကို လီးပဲကွ မင်းတစ်ဆွေတစ်မျိုးလုံးကို မင်းပြန်လိုးလိုက်ပါလား
စောက်ရေးမပါတဲ့သတင်းကို စောက်အချိန်ကုန်ခံပြီးရေးနေရသလား အားနေရင်ငါ့လီးလာစုပ်ကွ
မင်းအမေနဲ့ မင်းအစ်မတွေကို လိုးလိုက် ငါလိုးမသား သုတ်ကြောင် လီးပဲ
သိနေဒယ်လေ။ သိနေဒယ်။ 8-)
သို့သော် သိကြောင်း ကလဲ ပြောဖို့ လိုသေး တာမို့ …. ။ ;-)
အဟိ – ဒီနေ့ အဖို့ အတော် နေ့တွက် စီနေပြီ။
ကျနော်တော့ အတော်နောက်တဲ့လူ လို့ပဲပြောချင်တယ်..
သူဖိုးကပ်ပြတ် တာကိုကြွားချင်တာလား မသိ..
ဒါနဲ့ သဂျီးမင်း တချို့မန့်ထားတာတွေ မမြင်သေးဘူးထင်ပ..
ကိုအမတ်မင်းရေ .. http://myanmargazette.net/wp-admin/admin.php?page=wp-admin-microblog/wp-admin-microblog.php …
မိုးစက်လည်း အခုမှသိလို့ သိပြီးသားဆိုလည်း ဟီး .. တစ်ဆယ်
ဒါပေမဲ့ အဇူရီကြီးက ဘာမှမပြောတော့ ၀င်မပြောတော့ပါဘူးလေ..
ဘာမှကိုလဲ မမန့်တော့ပါဘူး.. နော့
တိရစ္ဆာန်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့ ရုံးတင် တရားစွဲမယ်…
စံနစ်တကျ ကို စီစဉ်ပြီးတော့ လုပ်ကြံတဲ့ အမှုကြီးပဲ။
ခြင်ကို ဒီလိုပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင် ရိုက်နိုင်တာလည်း
ပညာ ပဲ ဗျာ။
ကိုယ်ဟန်ပြမယ် လေး သနားပါတယ် ဗျာ…… သူ့ခမျာ ဘယ်လောက်ဒုက္ခခံပြီး ကိုယ်ဟန်ပြလိုက်ရလဲ မသိဘူး……..ဂီ့ကို တိရိစ္ဆာန်ညှင်းပန်းနှိပ်ဆက်မှုနဲ့ တရားစွဲရမယ်……. ဂီရဲ့ အနုပညာ ဖန်တီးမှုကိုတော့ လေးစားတယ်ဗျာ….. စာအရေးအသား စိတ်ဝင်စားအောင် တင်ပြတတ်မှုနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်တာ တော်တော် ကောင်းတယ်ဗျာ…… ဒါနဲ့ စကားမစပ် ဂီက ဘာကင်မလာနဲ့ ရိုက်တာလဲ မသိဘူးနော်…….
Body – Canon EOS 550D,
Lens – Tamron Macro 90mm
fully macro mode, 1:1 x, no flash fired,
f/9 – f/11
အူးဟူးဟူး ရူးသွားနိုင်တယ်ဗျို့………. ကန်နွန်၅၅၀ကြီနဲ့ တာမရွန်း မိုက်ခရိုပါလားဗျ…… အားကျလိုက်တာဗျာ…..
အထင်မကြီးပါနဲ့ …ဖိုက်ဒီ မ၀ယ်နိုင်လို့ ဖိုက်ဖိုက်ဇီးဒိုးဒီ ၀ယ်ပီး
၁၀၀မမ မကိုင်နိုင်လို့ သာ့ဒ်ပါတီ ၉၀မမ ကိုင်ရတာပါ…
တကယ်လားလို့ ဦးလေးက သိတ်နောက်တာပဲ… အီတလီအသင်း ကြိုက်တဲ့သူအချင်းချင်းမို့ နော်… ဟဲဟဲ… ဒီညရော ဘောပွဲ ကြည့်ဦးမှာလားဗျ…
နေ့ဘက်တွေ ဘလက်ကော်ဖီတွေ လှိမ့်သောက်ပီးသကာလ..
(စံတော်ချိန်အရ သည်မှာ မနက် ၂နာရီ ၄နာရီပွဲတွေမို့)
သရေကျပြန်တယ်… သိပ်တော့ ကိစ္စမရှိ
နောက်ဆုံးပွဲက မျှော်လင့်ချက် မကျန်တဲ့ အသင်းနဲ့ ကန်ရမှာမို့…
အော် ဖြစ်ရတယ် သနားစရာဘ၀လေးပါလားနော် မသေခင်လေးတောင် တန်အောင်ခိုင်းစားလိုက်သေးတယ် ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက် ထားလိုက်သေးတယ်။